အစိတ်အပိုင်းများ, ဆောက်လုပ်ရေးအစိတ်အပိုင်းများ, Tunneling အစိတ်အပိုင်းများ Casting စက်အစိတ်အပိုင်းများ, - Rotie သတ္တု
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-574-83067126
သတ္တုတွင်းနှင့် Tunneling အစိတ်အပိုင်းများ
Ningbo Rotie3foundries နဲ့4စက်စက်ရုံတွေရှိပါတယ်စသည်တို့ကိုတဲ့ professional သတ္တုတွင်းနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတူးဖော်ရေးအစိတ်အပိုင်းများ၏ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စက်အတွက်အထူးပြုကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ post ကိုတင်းမာမှုများ system component များကိုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအဓိကအား Grey ကသံနှင့်ကျဇယားသံကိုနှင်ထုတ်အဖြစ်ကာဗွန်သံမဏိ, သံမဏိ, လူမီနီယမ်, ကြေးနီစက်ထုတ်လုပ်သည်။
Bolt ပြီးတော့အခွံမာသီးနှင့်အတူသတ္တုတွင်း Components
သတ္တုတွင်း Bolt ပြီးတော့အခွံမာသီး
Post ကိုဆယ်ပါးသည် Grey ကသံနှင့်အတူစီးရီး Flat Anchor ...
ကျဇယားသံ & Sg နှင့်အတူစီးရီး Anchor ဌာနမှူး ...
7 × 0.5 '' Anchor ဌာနမှူး - 45 # သံမဏိ
ကျောက်ဆူးသော့ခလောက် - 45 # သံမဏိ
ပြင်ဆင်ပြီးသုံး - 45 # သံမဏိ
စည် - 45 # သံမဏိ
0.5 '' Barrel - 45 # သံမဏိ
casting သံမဏိ - ခေါင်းလောင်း Grouting
အလင်းဆုံသည့်အခွံမာသီး - 45 # သံမဏိ
19 × 0.5 '' Anchor ဌာနမှူး - 45 # သံမဏိ
OEM အင်ဂျင်နီယာစက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း Casting
လေ့ကျင့်ခန်း - ခွန်အားဖြစ်သံမဏိ
ဘယ်အချိန်မှာဘာကြောင့်လဲ NINGBO ROTIE အသုံးပြုနည်း?
သငျသညျ, တင်းကြပ်စီမံကိန်းကိုသတ်မှတ်ရက်တွေ့ဆုံရန်ပုံစံ, မထိုက်မတန်နှင့် function ကိုအဘို့စမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာ - ထုတ်လုပ်မှုမတိုင်မီဒီဇိုင်းကိုအပြစ်အနာအဆာများနှင့်အခြားအဘိုးထိုက်သောပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပစ် ...
သြစတြေးလျ, အဆိုပါကုမ္ပဏီ, 2-100KG အကြားသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုမှကျူးလွန်သောထုတ်ကုန်အဓိကအားဖြင့်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း, ဥမင်, အခြေခံအဆောက်အအုံများ, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တံတားစက်မှုလုပ်ငန်းအကြောင်း 90% တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ပို့ကုန်အတွက်အသုံးပြုကြသည်, United States ကိုတင်ပို့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း, ဥရောပနှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်ထိုနေရာများ, ထုတ်ကုန်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ထဲမှာအကောင်းတစ်ဦးဂုဏ်သတင်းကိုပျော်မွေ့။
နည်းပညာလူ့အဖွဲ့အစည်းပြောင်းလဲနှင့် Ningbo Rotie ကမ္ဘာချီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ်။
စက်အစိတ်အပိုင်းများ, ကြိတ်, ညှပ်, ဂဟေဆော်သိကောင်းစရာများ,
Adress: ROOM တွင် 2668, မြောက်အမေရိကပိတ်ပင်တားဆီးမှု, Yinxian ရိပ်သာလမ်း, Yinzhou ခရိုင်, Ningbo မြို့, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ် No.1299 အရှေ့ပိုင်းအစိတ်အပိုင်း
ဖက်စ်: + 86-574-83067026
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. signifies အဖြစ်ကျောက်ချစခန်းတစ်ခု comp ဖြစ်ပါတယ် ...
တစ်ဦးက၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးအဆင့်တွင် Post-tensioni ...
Ningbo Rotie ရဲ့ Precision စက်
Ningbo Rotie ရဲ့ Precision စက်ပစ္စည်း operatic ...